Shiinaha Iron oxide madow soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha 722/750 | Midabka Shencai
1. Ferrosoferric oxide waa maado magnet ah oo inta badan la isticmaalo. Waxsoosaarka nadiifka ah ee loo yaqaan 'ferrosoferric oxide' ayaa loo isticmaalaa inuu yahay alaab ceeriin ah oo loogu talagalay duubista cajaladaha iyo qalabka isgaarsiinta. Magnetite-ka dabiiciga ahi waa alaabta ceeriin ee birta lagu sameeyo.
Waxaa loo isticmaali jiray in lagu sameeyo hordhac iyo jaakad sare.
Aad ayey u adag tahay waxaana loo isticmaali karaa sidii wax la xoqo. Loogu adeegsaday si ballaaran bareegyada baabuurta, sida: Biriigada, kabaha biriiga iyo wixii la mid ah.
Waxsoosaarka 'Ferrosoferric oxide' waxaa looga aqoonsaday aagga qalabka alxanka ee Shiinaha, koronto, soosaarka siliggu wali wuxuu ku jiraa marxaladda ugu horreysa, rajada suuqa waa mid aad u ballaaran.
Daawada loo yaqaan 'Ferrosoferric oxide' sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sidii midabbo iyo sifeeyo. Xirxirida alaabta:
"SHENMING" brand synthetic pigment pigment iron iron oxide madow 722 wuxuu ku raaxeeyaa sumcadda suuqa sare wax soo saarka si fiican ayaa loogu iibiyaa dalka oo dhan.
Haddii aad xiiseyneyso inaad ka iibsato midab tayo sare leh midabka birta ah birta madow ee 722 madow kana yimaada Shiinaha, SHIJIAZHUANG SHENCAI PIGMENT FACTORY ayaa ah xulashadaada ugu fiican.
Magaca Ganacsiga IRON OXIDE MADOW
Tusmada midabka Midab madow 11 (77499)
CAS Maya / lambar No. 1317-61-9 / 215-277-5
Sooc Tusmada (Fe3O4) % ≥95
Res On 325 mesh % ≤0.5
Cusbada biyaha ku milma % ≤0.5
Culeys gaar ah g / cm3 4.6
Hore: birta xabagta huruud ah 311/313/920
Xiga: Macdanta birta cagaaran 5605/835